प्रेम गरेको भन्दै युवतीमाथि कुटपिट, महिला हिंसाको कहालिलाग्दो घटना(भिडियोसहित) - Bulletin Nepal
डा गोविन्द केसीको अनसन ः के बन्दुक उल्टो पडकने छ-अटो भिलेज क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा, एकीकृत सम्पति कर बुझाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको माग-धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको निधन-पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता,प्रेस काउन्सिल खारेज हुने-रुपन्देहीको भैरहवामा पनि डा. गोविन्द केसीको पक्षमा व्यापक समर्थन-साउने संक्रान्तिको महत्त्व-उच्च शिक्षा र पढ्ने शैलिका बारेमा एभरेष्टमा अभिमुखिकरण-माथेमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : मन्त्री बराल-सर्प संरक्षणका अभियन्ता-शिक्षक विज्ञापनमा आवेदन लिन अस्वीकार, गुपचुमा शिक्षक भर्ना गर्ने सडयन्त्र
प्रेम गरेको भन्दै युवतीमाथि कुटपिट, महिला हिंसाको कहालिलाग्दो घटना(भिडियोसहित)
५ साउन, भैरहवा । कथित तल्लो जातको युवकसँग प्रेम सम्वन्ध राखेको भन्दै एक युवती निर्घात कुटिएकी छन् । साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरु मिलेर युवकबाट ‘प्रेमिका’को परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराएका छन् ।
घटना हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ (साविकको असुरैना गाविस) डिहुली गाउँको ।
घटना गत असार १९ गते हो । तर, भिडियो सार्वजनिक भएसँगै घटना बाहिर आएको हो । परिवारका सदस्यले घेरा हालेर युवतीमाथि कुटपिट गर्दा स्थानीय रमिते बनेको खबर सलमान खानले अनलाईन खबरमा लेखेका छन ।
मीना यादव र दिनेश लोध एकअर्कालाई प्रेम गर्थे । मीनाको बाल्यकालमा नै अर्को युवकसँग बालविवाह भइसकेको भए पनि गौना हुन बाँकी थियो ।
युवक पनि विवाहित भएको बताइएको छ ।
दुईको प्रेम सम्वन्ध रहेको थाहा भएपछि परिवारले भेट्न आएको समयमा दिनेशलाई नियन्त्रणमा लिए । उनलाई कुटपिट गर्न थालेपछि युवती बचाउन गइन् । त्यही झोंकमा परिवारका सदस्यहरु मिलेर लछार पछार गर्नुका साथै लाठीमुग्रा गरे ।
कुटपिट हुँदा छिमेकीहरुले वरिपरि बसेर हेरिरहे । कसैले पनि कुटपिटमा उत्रिएकाहरुलाई रोकेनन् । घटना पश्चात प्रहरीले कुटपिट गर्ने युवतीका बुबा इन्नर अहिरलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्यो ।
तर, भोलिपल्टै मर्चवार गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बनियाँ, सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष सत्यनारायण बनियाँ र स्थानीय जर्नादन यादव लगायतले अहिरलाई छुटाएका थिए ।
विगतमा मानसिक रोगको औषधि खाएका अहिरले आफूलाई देउता चढेको भन्दै तोडफोड गर्न थालेकाले पनि थुन्न गाह्रो भएको मर्चवार निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरीश्रवर अर्यालले बताए ।
यद्यपि मेडिकल रिपोर्टमा युवतीमाथि निर्घात कुटपिट भएको देखिएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
अझ अनौठो त के छ भने युवतीलाई चरम याताना दिने युवती पक्षले नै एक लाख रुपैयाँ नगद समेत पाएको छ । दिनेशको परिवारले एक लाख रुपैयाँ कुट्ने पक्षलार्इ बुझाएका छन् ।
प्रेम सम्बन्धका कारण युवती बदनाम भएको र उनको विवाह गर्नुपर्ने भएको भन्दै दिनेश लोधका बुबालाई कारवाही स्वरुप एक लाख रुपैयाँ युवतीका बुबालाई तिर्न लगाएका छन् ।
हेर्नुहोस यो कहालिलाग्दो भिडियो ।
अटो भिलेज क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा, एकीकृत सम्पति कर बुझाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको माग
पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता,प्रेस काउन्सिल खारेज हुने
रुपन्देहीको भैरहवामा पनि डा. गोविन्द केसीको पक्षमा व्यापक समर्थन
डा गोविन्द केसीको अनसन ः के बन्दुक उल्टो पडकने छ
साउने संक्रान्तिको महत्त्व
उच्च शिक्षा र पढ्ने शैलिका बारेमा एभरेष्टमा अभिमुखिकरण
सर्प संरक्षणका अभियन्ता
शिक्षक विज्ञापनमा आवेदन लिन अस्वीकार, गुपचुमा शिक्षक भर्ना गर्ने सडयन्त्र